Teknolojia vaovao ho an'ny voankazo sy legioma mangatsiaka atolotra any Etazonia - Gazety "Potato System".
в vaovao, fahitana, Tekinika / teknolojia, Паковочное оборудование
Ny famokarana angovo dia manampy betsaka amin'ny fitomboan'ny entona rivotra, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fitsitsiana mety amin'ity sehatra ity. Ny Sampan-draharaham-pikarohana momba ny fambolena ao amin'ny Departemantan'ny Fambolena Amerikana (ARS) sy ny mpahay siansa avy ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia ao Berkeley dia manolotra soso-kevitra amin'ity tanjona ity mba hifindra avy amin'ny teknolojia ankehitriny amin'ny fanamafisan'ny legioma sy voankazo amin'ny isochoric, izany hoe ny mivaingana amin'ny rano. .
Ity fomba ity dia efa nampiasaina tamim-pahombiazana tamin'ny fitsaboana, ary ankehitriny dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo izany.
Ny mpamorona ny isochoric mangatsiaka dia Boris Rubinsky, izay nanoritsoritra ny foto-kevitra fototra tamin'ny 2005. Ny hevitra dia tsy ny hanova ny rano ao anaty tavy organika malefaka ho lasa ranomandry mafy mandritra ny dingan'ny fampangatsiahana, satria manimba ny firafiny ny kristaly. Mba hisorohana an'izany dia misy efitrano misy rindrina matevina misy ranon-javatra ao anatiny, izay miasa ho karazana insulation, ary mamela anao hitazona ny mari-pana eo amin'ny 0 ℃ eo ho eo, manakana ny taova mpanome ao anaty rano tsy hivadika ho ranomandry.
Ny fanandramana vao haingana tamin'ny ovy, voatabia vaovao ary anana dia naneho fa ny fanamainana isochorika dia mitahiry sakafo amin'ny fomba mitovy. Ny vy ao anaty fitoeran-javatra dia azo soloina plastika. Amin'ity karazana fanamafisam-peo ity dia tsy ilaina ny miantoka fa ny vokatra dia mivaingana tanteraka, na mivaingana haingana araka izay azo atao, ary noho izany dia tsy misy fanjifana angovo be loatra. Raha ny marina, ny fitoeran-javatra ihany no mila mangatsiaka.
Tsy toy ny fanamafisam-peo mahazatra, izay iharan'ny rivotra ny voankazo sy legioma ary mivaingana amin'ny mari-pana ambanin'ny zero degre Celsius, ny fanamainana isochorika dia mitahiry sakafo nefa tsy mamadika azy ho ranomandry mafy. Raha mbola aroboka ao anaty rano ny sakafo, dia voaaro amin’ny fiparitahan’ny ranomandry izy ary tsy voahelingelina ny firafitry ny voankazo.
Ny vata fampangatsiahana ao an-tokantrano rehetra dia azo ampifanarahana amin'ity karazana fanamafisam-peo ity amin'ny fametrahana efitrano manokana ao anaty vata fampangatsiahana. Tsy ho sarotra ny fanavaozana ny vata fampangatsiahana indostrialy sy ny fampifanarahana ny indostrian'ny sakafo manontolo, izany dia asa izay misy vidiny kely. Na izany aza, eo amin'ny sehatra maneran-tany, izany dia hamonjy 6,5 lavitrisa kilowatt-ora isan-taona, izay hiteraka fihenam-bidy 4,6 lavitrisa kg amin'ny entona karbônina.
Ny fampangatsiahana isochoric koa dia ahafahana mitahiry tsara kokoa ny vokatra vaovao toy ny voatabia, serizy ary ovy. Ny tombony hafa amin'ny fanamainana isochorika dia ny famonoana mikraoba mandritra ny fanodinana.
Ny rojo famokarana sy fitsinjarana sakafo mangatsiaka dia afaka mampiasa fanamafisam-peo isochoric - manomboka amin'ny mpamokatra ka hatramin'ny mpanodina, mpivarotra ambongadiny ary mpivarotra.
Tags: legioma mangatsiakaVoankazo mangatsiaka sy voaroyfanamafisam-peo isobarikaisochoric mangatsiakamanaitra ny fahatafintohinana
"Novgorod Agrarian" dia nanangana fivarotana legioma mangatsiaka
Tamin'ny 16 Desambra, miorina amin'ny foiben'ny lozisialy an'ny kooperativa famatsiana mpanjifa sy varotra "Novgorodsky Agrariy", dia nanomboka niasa ny fivarotana vaovao ho an'ny fanamainana ny vokatra ...
Trano fitehirizana ny vokatra fambolena voavoatra miaraka amin'ny velarantany 17,6 arivo metatra toradroa no haorina ao amin'ny tanàna ambanivohitr'i Rybolovskoye (distrikan'i Ramenskoye). Fahazoan-dalana...
Nampitombo ny fanondranana legioma mangatsiaka i Ozbekistan
Araka ny filazan'ny mpandinika EastFruit, nandritra ny 1 Janoary ka hatramin'ny 20 Oktobra 2021, dia nampitombo ny habetsaky ny fanondranana legioma mangatsiaka i Uzbekistan ...
Famatsiana ara-bola ny 15 tapitrisa rubles. dia hamela ny fikarohana agrobiotechnological any Altai